03/01/2019 - Page 2 sur 4 -
Filana andavanandro : Nahitana fiakarana avokoa ny PPN
Nahitana fiakarana avokoa ireo entana ilaina amin’ny fiainana andavanandro . Niakatra manodidina ny 3000 Ariary hatramin’ny 5 000 Ariary ny gony amin’ireo entana fampiasa amin’ny andavanandro tao anatin’ny iray volana izao, raha ny fanamarihan’ireo mpivarotra …Tohiny
SEG : Diso kajy
Nahagaga ihany ny nandre ny fomba fitenin’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimaria nandritra ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, manoloana ny hetsika fitakiana ny marina tamin’ ny safidim-bahoaka ny faha-19 ny volana desambra lasa teo. Nambaran’ity …Tohiny
Taksiborosy nivadika tany Ankazobe : Olona 1 maty, 7 naratra mafy
Lehilahy iray no namoy ny ainy nandritry ny lozam-pifamoivoizana niseho tany amin’ny lalam-pirenena fahefatra, izay mampitohy an’Antananarivo mankany Antsiranana, teo Mandrosoa Ankazobe, noho ny fivadihana fiara. Ny alarobia lasa teo tokony ho tamin’ny 7 ora …Tohiny
Fitsarana Avo (HCJ) : Naharay fitoriana 4 lehibe ny taona 2018
Nanambara ny teo anivon’ny Fitsarana Avo (HCJ) fa fitoriana efatra lehibe no voarain’izy ireo nandritra iny taona 2018 iny. Ny roa tamin’izany dia mirakitra fitoriana Filoham-pirenena teo aloha, ary ny iray fitoriana minisitra teo aloha …Tohiny